Ogaden News Agency (ONA) – Mudane Maadeey oo Kahadlay Kalfadhiga 16aad oo Looga Hadlyay Dadyowga Dulman.
Mudane Maadeey oo Kahadlay Kalfadhiga 16aad oo Looga Hadlyay Dadyowga Dulman.
Posted by ONA Admin	/ April 28, 2017
Mudane Cabdiraxmaan Sh.Mahdi (Maadeey) ayaa khudbad taariikhi ah ka jeediyay kalfadhiga 16aad oo looga hadlyay dadyowga dulman. Kalfadhigan oo ka dhacay magaalada New York ayuu Mudane Cabdiraxman ka jeediyay khudbad meelo badan taabanaysa oo ku saabsan dhibaatooyinka kala duwan ee shacabka Soomaalida Ogadenya uu Gumaysiga Itoobiya kuhayo.
Mudane Maadeey ayaa uga mahadceliyay madaxda iyo masuulinta kala duwan ee ka qaybgalay kalfadhigan lagu qabtay xarunta qaramada Midoobay (QM) ay ku leedahay magaalada New York. Mudanaha ayaa si faah faahsan uga waramay xaalada shacabka Soomaalida Ogadenya ee wakhtigan xaadirka ah.
Mudane Cabdriraxman ayaa ugu baaqay in beesha caalamku ay si buuxda uga hawl-gasho sidii looga hortagi lahaa xasuuqa iyo tacadiyada lagu hayo shucuubta ku hoos dulman taliska Woyaanaha. Wuxuu sheegay in horumar lataaban karo laga gaadhay arimaha qaarkood balse ay wali wax badan dhiman yihiin. Waxaa kaloo uu sheegay in abaaraha iyo cudurada saameeyay shacabka Soomaalida Ogadenya aysan beesha caalamku waxba ka qabanin.
Waxaa kaloo uu dul-joogsaday Mudane Cabdiraxman in taliska Gumaysiga Itoobiya uu mudo dheer cuna qabatayn dhinac waliba ah ku hayay Ogadenya. Saxaafada iyo Hay’adaha Samafalka ee caalamiga ah waa laga mamnuucay in ay ka hawlgalaan wadanka Ogadenya. Gumaysiga Itoobiya ayaa qariyay abaaraha iyo cudurka daacuunka oo fara ba’an kuhaya Ogadenya, taasoo markii dambe uu ku fiday wadama dariska ah.
Dhinaca kale Mudane Cabdiraxman Maadeey ayaa sheegay in QM iyo wadamada deeqda bixiya ay si wanaagsan ula socdaan xaalada ka jirta Ogadenya. Taliska Wayaanaha ayaa warar xaqiiqda ka fog iyo muuqaalo aan sal iyo baar toona lahayn ka diyaariyay xaalada daacuunka ee Ogadenya kajirta taasoo ay wali shacabku u dhimanayaan.
Wuxuu Mudane Maadeey kusoo gunaanaday khudbadiisii taariikhiga ahayd ee uu ka jeediyay kalfadhiga 16aad oo looga hadlyay dadyowga dulman in sida ugu dhakhsaha badan looga hawlgalo dhibaatada Ogadenya kajirta. Wuxuu beesha caalamka ugu baaqay in loo gurmado shacabka tabaalaysan ee Soomaalida Ogadenya. Sidoo kale wuxuu ka codsaday in beesha caalamku cadaadis ku saarto taliska Woyaanaha sidii shucuubta ku hoos dulman sida Ogadenya, Oromiya, Afar, Omo iyo kuwo kale oo aad utiro badan ay xuquuqooda u heli lahaayeen.